Nigranee | » तपाईंको खुट्टा फर्कने समस्या छ ? यसरी घरैमा उपचार गर्नुहोस् तपाईंको खुट्टा फर्कने समस्या छ ? यसरी घरैमा उपचार गर्नुहोस् – Nigranee
तपाईंको खुट्टा फर्कने समस्या छ ? यसरी घरैमा उपचार गर्नुहोस्
निगरानी October 26, 2019 585
पछिल्लो समय मानिसमा लाग्ने रोग पनि अनेकन देखिएका छन् । विशेषगरी हाडजोर्नीलगायतका रोगले ६० वर्षमाथिका मानिसलाई सताउने गरेको छ भने खानपान र जीवनशैलीका कारण बिरामी हुने पनि धेरै छन् । यी बिरामी मानिसको सूचीमा खुट्टा फर्कने समस्या पनि बढ्दो अवस्थामा छ ।कहिलेकाही हामीलाई खुट्टा अर्थात् पिँडौँला फर्कने समस्याले सताउछ । खुट्टा फर्किंदा अत्यन्तै शारीरिक पीडा हुन्छ । खुट्टाको तिघ्रानिर वा पिँडौँलाको मासु पल्टनु वा अर्कोपट्टी सर्नुलाई सामान्य बोलीचालीको भाषामा खुट्टा पल्टिनु, बाउँडिनु वा खुट्टा फर्किनु भनिन्छ।
प्रायः राति खुट्टा पल्टिने वा बाउँडिनु गदर्छ। एक्कासी तिघ्रा र पिँडौलाको मासु खुम्चिन गई राति अथवा आराम गरेको बेला खुट्टा पल्टिन्छ। तिघ्राबाहेक खुट्टाको पैताला तथा शरीरका अन्य भाग पनि बाउँडिने गर्छ। यो समस्या अधिकांश मानिसले भोग्ने गरेका हुन्छन्।पल्टिएको ठाँउमा मासुको डल्लो जम्मा हुनुका साथै दुखाइको महसुस हुन्छ। तिघ्राको मासु पल्टने अवधि केहि समयदेखि धेरै मिनेटसम्म हुने गर्छ। दुखाइ कम भएपछि एकैठाउँ डल्लो परेको मासु ठीक ठाउँमा आउन केही समय लाग्ने गर्छ । सबै उमेरका मानिसहरुमा यो समस्या देखिन्छ । प्रायः अधवैँसे तथा बुढाबुढीहरुमा यो समस्या बढी देखिने गर्छ।
खुट्टा फर्किने वा बाउँडिने समस्याको यकिन कारण भने छैन। विविन्न कारणले गर्दा यस्तो समस्या देखापर्छ। मानव शरीरमा क्याल्सियम र पोटासियम नामक भिटामिनको कमी हुँदा यो समस्या देखा पर्ने डाक्टरहरु बताउछन् । सामान्यतया निम्न समस्याहरुले गर्दा खुट्टा फर्किने गर्दछ ।
अकास्मत रुपमा आईपर्ने यो समस्याले कुनै संकेत दिदैन । फलस्वरुप एकान्त तथा एक्लै भएको अवस्थामा खुट्टा फर्किने समस्याले वढी पिरोल्ने उनको भनाई छ ।एक्कासी खुट्टा फर्किएमा आराम गर्ने, फर्केका ठाउँमा हल्का हल्लाएर मालिस गर्ने, फर्केका भागमा हिर्काएर भाईव्रेशन दिएमा खुम्चेका मशल तथा नशाहरु १० देखि २० मिनेटमा यथास्थानमा जाने गर्दछ । जसले खुट्टा फर्किने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
यसको रोकथामका उपायहरु यस्ता छन् :-
१. प्रशस्त पानी, फलफूलको रस र दालको रस पिउने।